अल्विनाले टिन प्रिन्सेस नेपाल २०१८को ताज चुमिन भने समिना नकर्मीले फस्ट रनर अपको । बधाई छ ! – Hamrosagarmatha.com
अल्विनाले टिन प्रिन्सेस नेपाल २०१८को ताज चुमिन भने समिना नकर्मीले फस्ट रनर अपको । बधाई छ !
काठमाडौं/हाम्रो सगरमाथा ।
‘टिन प्रिन्सेस नेपाल–२०१८’को उपाधि काठमाडौंको ठमेल निवासी १६ वर्षीय अल्विना तिमल्सिना र समिना नकर्मीले FIRST RUNNERUPको उपाधि हाथ परेका छन् । RAMP ZONE द्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रम राजधानीको राष्ट्रिय नाचघरमा भएको थियो भने ‘टिन प्रिन्सेस नेपाल–२०१८’ मा आफ्ना दर्जन प्रतिस्पर्धीको उत्साह पुर्वक सहभागीता रहेको थियो ।
प्रतियोगितामा अल्विना तिमल्सिनाले टिन प्रिन्सेस नेपाल–२०१८को ताज चुमिन भने समिना नकर्मी फस्ट रनर अप, सविना धानुक सेकेन्ड रनरअप बन्न सफल भए । अन्य उपाधि तर्फ मस्ट पपुलरमा मोमिला भुजेल मगर, बेस्ट पर्सनालिटीमा निशा लता राई, मस्ट फोटोजेनिकमा आरती चौलागाई, मस्ट डेडिकेटेडमा तारा दयाल, बेस्ट क्याटवाकमा शान्ति ढकाल, बेस्ट स्माईलमा आस्मा खड्का, मस्ट ट्यालेन्टमा सविना धानुक भएका थिए ।
RAP ZONEकि अध्यक्ष रमी श्रेष्ठले युवतीहरुको व्यक्तित्व विकास र प्रतिभा प्रस्तुतिका लागि यो प्रतियोगिता आयोजना गरिएको बताईन् । टिन प्रिन्सेस नेपाल–२०१८को जजको भूमिका गायक आनन्द कार्की, संचारकर्मी सुर्य चन्द, अभिनेता प्रदीप खड्का, संचारकर्मी राजेन्द्र लुइटेल, सौन्दर्य ब्यबसायी टेक राज पाण्डे, लेक्चरर ज्योत्सना राजभण्डारी, गायिका बसन्ता प्रकृति लगायत थिए । मोनिका श्रेष्ठ र दिग्बिजय श्रेष्ठको संयोजनमा कार्यक्रम भएको थियो ।
हाम्रो सगरमाथा/बन्दना घिमिरे
यसपालिको तिज नजिकिदै छ, तिजको नजिकिदै गर्दा बिभिन्न खालको तिज गित सार्वजनिक हुन थालेको छ । यसै क्रममा नेपाली महिलाहरुको महान पर्व तीजलाई लक्षित गरी निकालिएको चाइनाको रेलको चर्चा नेपाली महिलाहरु बीच बड्न थालेको छ । चाइनाको रेल गितमा सरु गौतमको स्वोर रहेको छ भने गीतमा मिठो सब्द सिपालु गीतकार कुमार कट्टेलको रहेको छ । गीतमा संगीत दिपक शर्माको रहेको छ भने यसको एरेंजेर सुदिप सगर रहेका छन् । यस गीतमा सुप्रिया कटुवाल र सब्बुको मज्जाको नाच देख्न सकिन्छ । भिडियो देशभरका रेडियोमा गुन्जिन थालेको छ भने सामुदायिक टेलिभिजनमा विशेषगरि बज्न थालेको छ । गीतको भिडियो निकै राम्रो बनेको छ ।